Galmi Waraana Kononeel Abiyi Morma Isaa Funyoof Kennuu Dha – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooGalmi Waraana Kononeel Abiyi Morma Isaa Funyoof Kennuu Dha
Damee Boruu: Sadaasa 13, 2020
Bifa kamiin iyyuu yoo madaalee sammuun kononeel Abiyi jeequmsa guddaa kan qabuu warra hammenyaan sanyii dhala nama lafa irra dugugganii baleessan garee akka Hitilarii fi Polpot wajjin nama ramadamu dha. Gareen kun laoheen isaanii dhiiga namaa dhangalaasun qofa qabana argatii. Namoonni amala kana qabaatanii gara aangoo mootummaa olaanaa dhufan biyya lafaa kana irratti baayyee xiqqoo dha.Garuu seenaa badii sammuu nama keessaa bahuu fi irranfatamuu hin dandeenye dhiisanii darbu.
Namni kun erga Mootummaa harka isaa galfatee as kan ifatti agarru malee gaafa basaasa EPRDF keessa tures akkuma kana namoota nagaa fixaa hin ture jechuu hin dandeenyu. Nama sammuun isaa tasgabbii fi madaalli hin qabnee kanaa utuu beekanii warri aangoo dabarsee isaaf kanne gareen EPRDF jedhee of waamu uummata Impaayeera Itoophiyaa miilatti kufanii dhiifama gaafachuu qabu. Keessatti kononeel Abiyi kan guddisee kononeelumaa isa badaasse TPLF yoo tahu galatni isaaniif qabu Uummata Tigray lafa irraa dugugee balleessuuf xiyyeefachuun baayyee nama ajaai’ba. Namni harka isa nyaachisee fi harma haadha isaa ciniinu nama kana.
Kononeel Abiyi gaafa EPRDFiin muudamee aangoo fudhatu ifatti yaroo dubbatu waan lama naaf hin liqifamne. Inni duraa akeeka Minilki hojii irra holshuun barbaada yaadni jedhu falla qabsoo bilisummaa Oromoo akka tahe anaaf ifaa dha. Namni kun qabsoo Uummatni Oromoo bara dheeraa dhiiga itti dhangalaasaa jiruuf guufuu guddaa tahuu akka deemuu hubachuun nah in rakkifne. Yaada isaa kana guyyaa sanaa kaase jabeesse dura dhaabbachaan jira. Yaadni inni lammaffaa haati isaa akka ‘mootii torbaffaa’ tahu akka isaaf himte biyya laafatti gad bahee himachuun ammam namni kun kichuu akka tahetu natti mul’ate. Akka yaada koo yoo tahe waan abjatuu fi hawwuu uummatti gadi bahee himachuun barbaachiisaa miti. Guyyaa abjuun fi mul’ani haadha isaa guuteef gad bahee himachutu caala natti fakkaata. Haa tahu malee mooti tahuuf abbaluun isaa akka akeeka Minilki bakkaan gahuu yaaddoo natti hin taane. Namni akeeka Minilki bakkaan gahuu yaadu nama dheebuu dhiiga dhuguu qabu qofa.
Yaaddoon koo utuu olee hin bullee hojiin hiikamuu eegale. Yaada isaa kana suuta jedhee illee karaa qabsifachuuf obsa hin qabu. Kan isa duraa dhaabbatuu miti kan isa jala deebisee dubbatuu hojii irraa ar’iuu, hidhuu fi ajjeessuu babalchaa dhufe. Biyya nagaa qabu jeequu fi hunkuruu jalqabe. Namni waan inni jedhe hin fudhanne baduu yookan du’uu tahe. Akkaatan deemsa isaa baayyee jarjartii waan qabuuf namni qophaa’ee jalaa baqachuuf illee yaroo hin argatu.
Akkuma jedhee akeeka Minilki hojii irra olchuuf duraan durse lafee Mootota Habashaa funaane siidaa ijaareef. Itti aansee Uummata Oromoo jilbeefachiisuu hidhuu fi ajjeessu irratti xiyyeefate. Uummatni Oromoo akka hin jilbeefannee yaroo argu warra dida agarsiise irratti waraana labse akka komondi postii jalatti bulan godhe. Naannoon hafanis komondi postii hin labsamne jalatti akka bulaa jiran waan ifa jiru. Uummanti Oromoo Dhihaa Oromiyaa xiyaaran barbadaa’aa fi summiin itti biifamaa ukkamsamaa ture. Qabeenyaa uumaa, beeladaa fi uummata irraa gagaga’ama guddaan akka gahu godhee jira.
Waraanni Uummata Oromoo irra qubate seeraa biyyaa fi biyya lafaa cabsee uummata nagaa jumulaan hidhuu, ajjeessuu, saamuu, qabeenya isaa barbadeessuu, beelada jalaa ajjeessu, midhaan maasii irratti gubee uummata beellese harka laachisuuf waggaa lamaa ol kan hojjechaa ture. Har’a muddaa guddaa keessa seenee bakka hundatti daa’imanii amma manguddoo waxxaluun, hidhuun, ajjeessuu fi dubartii gudeeduun jabaatee hammaachaa jira. Waraanni isaa qawween akka nama saamee nyaatu labsee sabni qotatee, horatee, daldalee jiraachuu dadhabee jira. Biyyi akka goolamuu fi sirna dhablummaan akka dagaagu gochuudhaan maal akka irraa buufatu hin beeku.
Karaa biraa waa’een kaayyoo fi akeeka Minilki bakkan gaha jedhe anaaf yaadoo yoo tahu warra nafxanyaaf bilbila lootoriin isinii bahee jedhutu itti dhaga’ame. Gaafa sanaa kaasanii akaakayuu sadiin Masaraa Minilki qaubatanii akka namani tokko isatti hin siiqne irraa ittisanii kan dhunfaa isaanii godhatan jiru. Uummata Orommo kumaatamaan dhiiga isaa dhangalaase gara aangoo isa fide akka ganu isa godhan. Hiriyyoota isaa warra du’a malee gargar kan nu baasu hin jiri jedhu wajjin jiraan gargar bahe. Warri hin du’iin hafe akka mana hidhaa keesatti gidirfamu godheera.
Warri nafxanyaa hudduu isaa jala deemanii waan inni hojjetu maraa bareedaa jechaa hojii isaanii hojjetachu jabeessanii itti muddaa jiru. Isa gowwoomsuuf ati “nabiyii” Waaqayyoo akka biyya kana fayyiftuuf si erge jechaa itti ejjetanii biyyicha diigaa jiru.Warra nafxanyyotaas tahe kononeel Abiyi biyyichi lammaffa deebi’ee fayyuu akka hin dandeenyetti akka diigaa jiran waan hubachuu danda’an natti hin fakkaatu. Rakkinni isaanii akkuma kononeel Abiyi isaanis Masaraa Minilki qabatanii aangoo dhunfachuufachuu barbaadu. Uummata biratti keessatu Uummata Oromoo biratti fudhatama hin qabneef yaroof hudduu kononeel Abiyi jala dhokatanii guggufaa jiru. Inis isaan irraa waan sodaa qabuuf yaroo yaroon akka kartaa wal keessa isaan ‘bawazaa’ jira. Hiriyaan wal hin amanne laga cee’u hundaatti waliif kakata jedhu.
Warri nafxanyootaa aangoo qabachuuf jecha maqaa Amhaaraan jeequmsa bakka hundaa keessatti uumaa jiru. Yaadni isaanii RIB kana yoo qabatan sabaa fi sab-lammii hundaa cabsaanii Mootummaa Impaayeera Itoophiyaa durii sana deebisanii ijaaruuf waan ayyaana qaban itti fakkaata. Dhugaa lafa jiru irraa baayyee fagoo jiru. Jeequmsii fi nagaan biyyaa boora’uun eenyuunuu akka gargaaruu hin daneenyee hubatamuu qaba. Ilmaan nafxanyyotaa Masaraa Minilkii keessa Finfinnee tahanii hiyeessa qotee bulaa Ahmaaraa itti qawwee hiranii dhaqii lafa fudhadhu jedhanii ficisiisuun bifa kamiin iyyuu fudhatama hin qabu. Kan baayye na dhibu maaliif Uummatni Amhaara ilmaan nafxanyaa isaa wajjin jiraachuu illee balfattu amanee akka jala deemu dha. Namoota haala keessa jiran hubatee isaa gaggeessu filachuutu isaan baasa. Nafxanyoonni garaa isaaniif qofa malee eenyuufuu gaddaa hin jiran.
Waaraanni yakkamaa fi fokkisaan kononeel Abiyi fi nafxanyoonni Uuummata Tigray iraatti labsan waan baayye nama rifachiisu. Biyyi Amhaaraa takka tasgabbii godhatee bulee hin beeku. Kan namni ajjeefamu, saamamu fi ukkamame horiin furamuu Naannoo Amhaaraa keessa. Naannoo Tigray keessatti namni saamu fi ajjeessamu takka hin dhageenye. Naannoo hunda irraa kan tasgabbii fi nagaa qabu Naannoo Tigray qofa. Kana malee naannoo seera biyyaa kabajee filmaata godhee Mootummaa uummata ijaarate Naannoo Tigray qofa. Seera eegsisuuf kan duulamu yoo tahe naannoo Amhaaraa kan faanoo fi goboz halaqaan uummata goolaa jiru irratti tahuu qaba ture.
Garuu warri nafxanyaa shiraa xaxanii waraana keessaa bahu hin dandeenye akka galu isa gochaa jiru. Uummata nagaa humnan qaba jette ibsaa, wal quunnamtii, nyaataa fi bishaan irraa kutee beelaan fixxuun sanyii dugugaa(genocide) haala qabatamaan raawwatamaa jiru. Kanaaf waan hundaa duraa raga (material witness) tahu kan afaan kee bahee walitti hin qabamina, karaa hin deemina jettee Uummata Tigray doorsissun jabina miti. Karaa biraa michoonni kee ilmaan nafxanyaa dhaalota Tigray hojii keessaa baasuu fi saamuudhan (ethnic profile) cubbuu kee siif baayyisaa jiru. Hiriyyota kee, uummata kee, biyya kee fi sabaa fi sab-lammii abdii si eegachaa ture gantee harka nafxanyootaatti kufuun kee du’a kee du’a saree godhee jira. Kana booda siif dhume fira si cinaa dhaabbatu tokko hin qabdu. Galmii injifannoo kee mormaa kee funyoof laachuu qofa. Gaaffi saana warra ati dhiiga dhngalaafte hunda irraa biyyoon salphata.
ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከየአለም እቀፉ ህብረተሰብ የጦር እርዳታ አልጠየቀችም ። ኤርትራ የኢትዮጵያን ድንበር ጥሳ ገብታ አሸባሪን እንኳን ብታጠቃ ባሁኑ ሰአት ከወረራ ተቆጥሮ የአለም አቀፉ ህብረተሰብ ኤርትራ ላይ እንደገና ማዕቀብ ሊጥል ይችላል። ።
*የአፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያን የሚያዛትን የኢትዮጵያ መንግስት ሳያንገራግር ተግቢራዊ ለማድረግ ዝግጁ መሆን ይገባዋል ኤርትራ ከእዛ በሁዋላ በአፍሪካ ህብረት ወይም በተቢበሩት መንግስታት ሰላም አስከቢሪነት UN Peace Keeper or AU Peace Keeper በመሆን ብቻ ወታደሮችዋን ልትሰድ ትችላለች ወደ ኢትዮጵያ በመቀጠል ግብጽም ከተላከች ኢትዮጵያ ያለ ማንገራገር የግብጽ ሰላም አስከቢሪዎችን መቀበል ግዴታ የሚሆንበት ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚችል አይዘነጋ።